Kenya oo sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay hay’adda UNHCR inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma 30-ka bisha Juun ee 2022-ka. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Kenya oo sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay hay’adda UNHCR...
Kenya oo sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay hay’adda UNHCR inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma 30-ka bisha Juun ee 2022-ka.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma wixii loo gaaro 30-ka bisha Juun ee 2022-ka.
Maxay Qaramada Midoobay sheegtay?
“Waxaan aaminsamahay in shacbaka iyo dowladda Kenya ay sii wadi doonan soo dhaweyntooda ay deeqsinimda ku dheehantahay ee ku aaddan qaxootiga taasi oo ay muddo 30 sannadood ah soo wadeen, inta aad wadno geeddi socodka xalka loogu raadinayo qaxootiga ku sugan xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma,” ayuu yiri madaxa hay’adda UNHCR Filippo Grandi oo ku sugan Nairobi.
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa dhanka kale is hortaagtay go’aanka ay dowladda ku dooneysay inay ku xirto xerada qaxootiga ee Dhadhaab, qaxootiga halkaa ku noolna ay dib ugu celiso Soomaaliya.
Maxkmadda sare ayaa go’ankaasi ku tilmaantay mid aan dastuuri ahayn. Waxaa kale oo ay sheegtay in go’aankaasi uu xadgudub ku yahay xuquuqda qaxootiga.
Xiritaanka xeryaha maxay Soomaaliya ka tiri?
Kenya iyada ayaa faa’iidada ugu badan ka hesha qaxootiga, sannadkiiba waxaa ka soo gala qiyaas ahaan nus bilyan doolar iyadaaba dhaqaale ku qabta marka u maleyn maayo inay dan badan ugu jirto dib u celinta qaxootiga.”
Mareykanka ma wuxuu hor istaagayaa in Kenya ay dib u celiso qaxootiga?
Qoraal ka soo baxay wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Washington ay Kenya ka caawiso sidii ay u sii wadi lahayd marti galinta qaxootiga ay Soomaalida ku jiraan.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda ayaa lagu xaqiijiyay in sanadkii lasoo dhaafay oo kaliya uu Mareykanka siiyay Kenya lacag dhan $106 milyan oo doolar, taasoo qeyb ka ah dhaqaalaha lagu bixiyo qaabilidda dadka magangalyo doonka ah.
Hadalkan ayaa yimid xilli ay dhawaan Kenya ku dhawaaqday inay albaabbada isugu dhufaneyso xeryaha dhadhaab iyo Kaakuma oo hoy u ah boqollaal kun oo kasoo barakacay colaadaha waddamo ka tirsan Afrika.
“Xuquuqda bani’aadanka waa muhiimadda koowaad ee siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka uu adeegsado. Mareykanku wuxuu bixiyay ku dhawaad $106 milyan si loogu ilaaliyo qaxootiga laguna gargaaro howlaha bani’aadannimada taasoo uu ku caawiyay Kenya maadaama ay hoggaamiso dalalka gobolka ee martigaliya qaxootiga iyo magangalyo doonka kasoo jeeda Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Congo, Itoobiya iyo meelo kale.” Ayaa lagu yidhi bayaanka.
Previous articleIsbuurashada Israa’iil Kullan Diini ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof
Next articleDowladda Pakistan oo u yeeertay safiirka Pakistan ee dalka Sacuudiga kadib cabasho ka timid muwaadiniinteeda ku Nool Sacuudiga